Iingcebiso ezisi-7 zokukhetha isihloko esifanelekileyo kwincwadi yakho | Uncwadi lwangoku
Iingcebiso ezisi-7 zokukhetha isihloko esifanelekileyo kwincwadi yakho
Usenokucinga ngayo amaxesha amaninzi ngexesha lokuphuhliswa kwenoveli okanye ibali lakho, mhlawumbi nangaphambi kokuba uqalise, kodwa amaxesha amaninzi kuyenzeka xa ubhala igama lokugqibela kwaye kufuneka wenze esona sigqibo sichazayo:bhaptiza incwadi yakho enegama elifanelekileyo. Kwaye kulapho imfuno iqala ukumisela amagama achaza umsebenzi, lowo uphawula ngaphambili nasemva. Njengoko sisazi ukuba le meko iyakwenzeka kuwe ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ndishiya ezi zilandelayo Iingcebiso ezisi-7 zokukhetha isihloko esifanelekileyo kwincwadi yakho.
1 Khangela ukuba isihloko sele sikhona
2 Yiba nobuqili
3 Shwankathela umxholo womsebenzi
4 Izihloko ezimfutshane
6 Fumana amandla
Khangela ukuba isihloko sele sikhona
Amawakawaka eencwadi sele ebhaliwe emhlabeni, kwaye nokuba ungazibona ulunge kangakanani na kumfundi, kusenokwenzeka ukuba kungabikho kude kangako ukuba isihloko sakho sele sikhethwe ngumbhali ngaphambi okanye, ubuncinci, ngokufanayo. Zama ukusebenzisa uMnu Google kunye Chwetheza isihloko esikungqongileyo ukuze ubone ukuba ngaba ucinga ngesicwangciso B.
Ayifani ukubiza incwadi yakho "Intombi entle yomzala wam" kunokuba "uLolita", "Yonke into isekhaya" okanye nokuba "Intombi yomza wam." Ubuqili buhlala bubonakala ngokungabikho kuzo zombini izihloko kunye nomxholo, kwaye nangona ukuhamba kakhulu kugqwesile ayiyongcamango elungileyo nokuba, ukhetha isihloko esicebisa ngaphezulu kokuchaza ngokwenyani kubaluleke kakhulu xa kufikwa ekutsaleni umfundi.
Shwankathela umxholo womsebenzi
Isihloko, njengeqweqwe, kufuneka sishwankathele uluvo lomxholo womsebenzi ukuze umfundi angaziva elahlekisiwe kodwa kwangaxeshanye azi ukuba uza kufumana ntoni. Ukuba umxholo webali lakho, umzekelo, kukuseto emahlathini, sukuyibiza "Ulwandle lumanzisa iinyawo zethu" kuba libali elinye kuphela elibekwe kwiMeditera.
Nangona iincwadi ezingezizo ezokwenyani zihlala zifuna isihloko esichazayo ngakumbi, kunye neentsomi kuyaphikisana, kwaye ukukhetha isihloko kungekude kakhulu (okanye kungabikho ngaphezulu kwamagama asi-8) kuya kuba yeyona ndlela ilungileyo yokufunda abafundi okanye ukunakana umsebenzi wakho, ehlala ngokulula nangoko nangoko.
Ukuba unezihloko ezininzi kwaye ziyafana kakhulu engqondweni, ukhetho lweengcinga zokucinga zinokubakho eyona ndlela yokudibanisa iikhonsepthi kunye nokwakha isihloko esifanelekileyo. Kungenxa yokuba ukuba ubhala ngoNovemba Imvula, Imvula yasekwindla okanye iRain Leaves kwiphepha elinye, uya kuba nembono enkulu kwaye uya kuba nakho ukufumana isihloko ngokulula usebenzisa zonke izimvo onazo.
Ukuba ngokuqinisekileyo awazi ukuba yeyiphi isihloko oza kuyikhetha, olona luvo lubalaseleyo kukuthatha ukukhuthazeka kwabanye. Ukuskena eAmazon, iLa Casa del Libro abathengisi abathengisayo okanye ingqokelela yamva nje yomshicileli inokukunceda ucacise ngcono ukuba ulindele ntoni emsebenzini wakho okanye, okona kubaluleke kakhulu, yintoni eyenza ukuba ezo ncwadi ziphumelele. Kungenxa yokuba ewe, isihloko esifanelekileyo sihlala sidibaniswa nesilungileyo. . .
Isimbozo yile enye yezinto eziphambili xa uchaza umsebenzi, kwaye ukuba inobumbano kunye nesihloko, impumelelo inokuqinisekiswa. Sukuncipha kwiintsuku, izibonelelo kunye nemibono xa kuziwa ekudibaniseni eyona inshorensi kunye nesihloko kuba, ekugqibeleni, le combo iya kuba yeyonokukunceda uthathe umsebenzi wakho kwizikhundla eziphezulu.
Leliphi iqhinga olisebenzisayo xa kufikwa ekufumaneni isihloko somsebenzi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iingcebiso ezisi-7 zokukhetha isihloko esifanelekileyo kwincwadi yakho
Amanzi. Iinoveli ezi-6 kunye neenoveli zakudala ezinolwelo olubaluleke kakhulu